Jawaabaha degdeg ah ee su'aalaha SEO ugu badan la weydiiyo
Si aad boggaaga ugu muuqato SERP, waa inaad ogaataa in yar oo ka badan kaliya halbeegga qaabeynta sugidda mashiinka raadinta iyo sida ay u saameyn karto darajooyinkaaga. Si aad u dhisto olole wacan oo lagu guuleysto ama kormeero shaqada khabiirada SEO, waxaad u baahan tahay inaad heshid aqoonta qoto dheer ee mabaadi'da maareynta bogga iyo farsamooyinka. Sidaa daraadeed aynu ka wada hadalnay waxyaalaha muhiimka ah ee SEO-ga wax badan oo bilawga ah ayaa leh su'aalo ku saabsan habka horumarinta bogga laakiin ma hubo cidda weydiinaysa caddayn.
Su'aalaha badanaa la is weydiiyo ee ku saabsan SEO
Waa maxay farqiga u dhexeeya dabiiciga ah iyo raadinta bixinta?
Pais ama natiijooyinka raadinta unugyada waa kuwa ka muuqda TOP ee bogga SERP waxayna leeyihiin calaamadda "Ads. "Xaaladaha qaarkood, natiijooyinkani waxay sidoo kale ka muuqan karaan dhinaca SERP bogga. Kuwani waa domains in xayeysiis bixiyayaashu ay bixiyaan si ay uga soo muuqdaan TOP-ka makiinadaha raadinta ee kala duwan ee su'aalaha khuseeya isticmaalaha. Si aad u hesho raadinta lacag-bixinta, uma baahnid inaad sameyso ololey-celin fududeyn. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad bixiso qof kasta oo isticmaalkiisa gujinaya cinwaankaaga. Nooca noocan oo kale ah ayaa loo yaqaan 'pay-per-click advertising' waxaana loo isticmaalaa inuu soo jiito booqdayaasha cusub ee raadinta iyo kor u qaadista heerka guusha.
Raadinta dabiiciga ah ama aan la bixinin waxaa loola jeedaa natiijooyinka organic kaas oo ka muuqda mashiinnada raadinta iyadoo loo marayo wanaajinta bogga tayada. Ilaha shabakada ee la dhigo TOP ee raadinta dabiiciga ah waxaa lagu kala saari karaa tayada, tayada, iyo SEO-friendly. Websaytka TOP waa in la dejiyaa iyada oo la raacayo dhamaanba qaybaha raadiyaha. By hogaaminta raadinta dabiiciga ah, waxaad sare u qaadeysaa fursadahaaga si aad u wanaajisid wacyigaaga caanka ah iyo inaad soo jiidatid gaadiidka tayada ee u beddelaya iibka.
Imisa ayaan u bixinayaa adeegyada SEO? Qiimaha adeegsashada gawaarida macaamiishu waxay u kala duwanaan karaan iyagoo ku xiran nooca ganacsigaaga, niche market iyo size of optimization (maxalliga, waddanka, caalamka)
. Waxaa intaa dheer, qiimaha wuxuu ku xiran yahay hay'adda adeeg bixiyaha ee dejinta iyo sumcad. Haddii ay tahay mid si joogta ah ugu caan ah hay'ada suuq-geynta suuqa ee caalamiga ah, markaa inta badan kharashka adeegyadooda waxay ka badan doonaan sicirka celceliska suuqa. Hase yeeshee, dhammaan maalgashiyadaada waxaa lagu bixin doonaa casharrada. Taasi waa sababta aanad uga walwalsanayn qiimaha ololaha ololeynta tayada.
Ha ku dhicin shirkadaha bixiya SEO qiimo jaban. Xaaladaha badankood, waxaa jira habab aan xirfad lahayn oo khiyaano ah. Caadi ahaan, shirkadahaan waxay isticmaalaan farsamooyinka SEO-kumbuyuutarka si ay u gaaraan natiijo degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay u horseedi kartaa ganaaxyada Google iyo rikoodhada hoos loo dhigo.
Marka aan bilaabayo SEO, intee in le'eg ayaan sugayaa si aan u eego natiijooyinka wanaagsan ee ugu horreeya?
SEO waa nidaam waqti-qaadasho ah oo u baahan waqti iyo dadaal. Lama fulin karo habeenkaas. Waxay qaadataa laga bilaabo 6 illaa 9 usbuuc si loo hirgeliyo xeeladaha muhiimka ah ee SEO iyo dhowr bilood ka dib marka wax-ka-beddeliddu ay u-qoondeeyeen inay cusbooneysi-geliyaan suuq-geynta. Raadinta mashiinka raadinta waxay u baahan tahay waqti si ay u kala saarto oo u muujiso boggaaga isbeddelka si aad u hesho goobtaada booska sare ee SERP. Iyadoo ay ku xiran tahay suuqa xorta ah, baaxadda goobta iyo tayada waxqabadka, waxay qaadataa laga bilaabo 6 illaa 9 bilood si ay u bilawdid natiijada ugu wanaagsan ee SEO Source .